तुलसीपुर ४ मजुवाका रहेछन् कोरोना संक्रमित व्यक्ति « Farakkon
तुलसीपुर ४ मजुवाका रहेछन् कोरोना संक्रमित व्यक्ति
तुलसीपुर, जेठ ३ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रवार जारी गरेको सूचना गलत सावित भएको छ । संक्रमित व्यक्ति तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ का रहेको खुल्न आएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाका स्वाथ्य प्रमुख हरि पुनले शनिवार दिउँसो मात्रै बास्तविक संक्रमित व्यक्ति पत्ता लागेको जानकारी दिएका छन् । ‘मैले संक्रमित व्यक्ति संग कुरा गरे र उहाँले त्यो व्यक्ति आफु नै भएको बताउनु भयो,’ पुनले भने ‘ उहाँ आजै काठमाडौंस्थित शुक्रराज ट्रमा सेन्टर टेकुको आइसुलेसनमा गइसक्नु भएको रहेछ।’
शुक्रबार बेलुका ८ बजे स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमित व्यक्ति तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ भन्ने रहेको थियो । सूचना सार्वजनिक भएदेखि नै संक्रमितको खोजी थालिएको थियो । तरपनि पहिचान हुन नसकेपछि अन्यौंल छाएको थियो । झन्डै १८÷२० घन्टाको खोजी पछि शनिवार मात्रै बास्तविक संक्रमित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ मजुवाका रहेको पुष्टी भएको हो । मजुवाका संक्रमित व्यक्ति एक महिना अगाडि शान्तिनगर ५ का बहिनी ज्वाँईको उपचारको लागि काठमाडौंस्थित टिचिङ अस्पताल महाराजगंजमा गएका थिए ।
बहिनी ज्वाँइमा मृगौला र टाउको सम्वन्धि समस्या रहेको हुँदा उनी बिरामी कुरूवाको रूपमा त्यहाँ गएका थिए । अस्पतालले शनिवार शान्तिनगरका उनीहरुकै ठेगाना लेखेर पठाएपछि खोजी गर्दै जाँदा बास्तविक संक्रमित फेला परेका हुन । उनलाई अस्पतालवाटै संक्रमण फैलिएको आशंका गरिएको छ । उनका बहिनी ज्वाँईको पिसिआर रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ । शान्तिनगरका ती बिमारी युवालाई गाउँपालिकाले विपन्न व्यक्तिको सिफारिस गरेको पठाएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख पुनले जानकारी दिए ।